ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ (အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ) – Global News and Knowledge
Global News and Knowledge
ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ (အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ)
သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်းနှီးကိစ္စမတင်ပြခင်။ပြောပြသင့်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပါတယ်။စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ်ကကျောင်းဆရာမဖြစ်သူ။
တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကိုစိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်သည်။ကျောင်းသား/သူတွေကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်သည်။အသင်း (၁)သင်းစီကိုစာအိတ် (၁)အိတ်စီ ပေးသည်။
စာအိပ်ထဲမှာငွေ (၅)ဒေါ်လာထည့်ထားသည်။(မြန်မာငွေ ကျပ်= ၆၅၀၀ ဝန်းကျင်)ငွေ(၅)ဒေါ်လာထဲနှင့်ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကိုယ် သုံးပြီး။အရင်းအနှီးလုပ်ခိုင်းမည်။စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်က။
ပြင်ဆင်ချိန် (၁)ပတ်ရမည်။စာအိတ်ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာဖြင့်ကိုယ်ကြိုက်သည့်လုပ်ငန်း။သွားရင်းနှီးပြီး ငွေထပ်တိုးလာအောင်လုပ်ဆောရမည်။စာအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သည်နှင့်ရင်းနှီးရမည့်အချိန် (၂)နာရီသာ လုပ်ရမည်။
(၁၄)သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက။၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုံစံ။လုပ်ဆောင်ချက်။ပြန်ရလာသည့်ငွေ၊ စသည့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို။အခန်းရှေ့သို့ထွက်ပြီးကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောပြရမည်ဖြစ်သည်။
အသင်း(၁)သင်းစီရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားရမည့်အချိန်ဟာ (၃)မိနစ်စီသာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ဒီစိန်ခေါ်မှုမှာရင်းနှီးပြီး ငွေပြန်မရသည့် အသင်းရှိသလို၊ငွေအတော်အသင့် ပြန်ရလာသည့်အသင်းလဲ ရှိသည်။အံ့အားသင့် စရာကအသင်း (၁)သင်းဟာ
ဒေါ်လာ (၆၀၀)ကျော်အထိအမြတ်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။မြန်မာငွေ ကျပ်(၇သိန်း ၈သောင်း)ဝန်းကျင်။ထူးဆန်းသည်က စာအိတ်ထဲကငွေ(၅)ဒေါ်လာကို တပြားတချက်မျှမထိခဲ့ဘူးလို့လဲ သိရသည်။ငွေ(၅)ဒေါ်လာမှ = ငွေ(၆၀၀)ဒေါ်လာထိဆိုတော့၄၀၀၀% အမြတ်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။၂ နာရီအတွင်းထဲနှင့်ူဒီအသင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါသလဲ ??ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ အသင်းရဲလုပ်ဆောင်ချက်တွေ မဖော်ပြခင်။အခြားအသင်းများလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
အသင်း = (၁)ငွေ (၅)ဒေါ်လာဖြင့်တာယာ လေထိုးစက်၊လေစစ်ဆေးစက်၊ တွေကို ငြားရမ်းလာပြီးကျောင်းတွင်းကကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးပါကင်ထိုးသည့်နေရာရဲ့ အနီးမှာဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
တာယာ စစ်ဆေးခ၊လေထိုးခတွေကို ဝန်ဆောင်ကြေးယဉ်တစ်စီးကို (၁)ဒေါ်လာ ကောက်ခံသည်။ဖြစ်ချင်တော့ ယဉ်စီးနှင်းသူကျောင်းသား/သူများသဘောကျကြသည်။လမ်းကြုံတုံးလေး ကိုယ့်ယဉ်ရဲ့တာယာ၊ လေ၊ တွေကို စစ်ဆေးကြသည်။ခဏကြာတော့သင်းသားတွေဟာအိုင်တီယာတခုထွက်ပီး။စမ်းသပ်ချင်သည့်စိတ်ဖြင့်။
ဝန်ဆောင်ခ ငွေ(၁)ဒေါ်လာမကောက်တော့ပဲ။ယဉ်ပိုင်ရှင်ကသာ၊ ဝန်ဆောင်ခကိုစေတနာရှိသလောက်၊ပေးချင်သလောက်ပေး။ဆိုသည့် ဆိုင်းပုဒ်ပြန်ပြောင်းလိုက်သည်။
ရလဒ်ကတော့ဝန်ဆောင်ခ ပိုအရ များလာခြင်းဖြစ်သည်။တချို့ ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ(၃)ဒေါ်လာမှ (၅)ဒေါ်လာထိထုတ်ပေးကြသည်။ဒီလို စွမ်းဆောင်မှုကတော့ပြသနာတွေကို အကဲခတ်ပြီးပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းပဲဖြစ်သည်။ကျန်ရှိသည့်အသင်းများဟာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ကျောင်းတွင်းသို့ချိုချဉ်၊ မုန့်၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း။
popular ဖြစ်တဲ့ သီချင်းခွေထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်း။ကျန်သည့် ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲဝင်ငွေ၊ အမြတ်ငွေတွေကတော့ မဆိုးကြပါ။ဒါပေမဲ့ငွေလုံး၀ ရှာလို့မရတဲ့ အသင်းလဲရှိပါတယ်။သူတို့အသင်းကတော့စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်လာကိုထီသွားဝယ်လိုက်သည်။ထီမပေါက်ပါ။ကံနဲ့ကစားလို့ အရင်းနှီးပါပြုတ်သွားရော။ဒေါ်လာ (၆၀၀) ရှာနိုင်သည့်အသင်း။
ဟုတ်ကဲ့….သူတို့အသင်းကေတာ့အိုင်ဒီယာ အတ်ာလေးကောင်းပါတယ်။စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်ကို အာရုံမစိုက်။အခန်းရွေ့ထွက်ပြီး။ကျောင်းသား/သူများရဲ့ ရွေ့သို့ရွင်းလင်းပြောကြားရမည်။
(၃)မိနစ် အချိန်လေးကိုသာအသုံးချဖို့ အာရုံစိုက်သည်။လုပ်ဆောင်ချက်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ သူတို့ သွားသည်။ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲနှင့် တွေ့စုံသည်။သူတို့ကျောင်းမှာ ပြုလုပ်နေသည့်စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြောပြသည်။
ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရှေ့၌(၃)မိနစ် စကားပြောရမည့် အချိန်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ကြော်ညာပေးခြင်း။ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းပေးခြင်း။ကျောင်းသား/သူ(၁၄)သင်းဆိုသည်မှာနည်းသည့် လူတွေ မဟုတ်၊အခြားကျောင်းသား/သူတွေလည်း ရှိသေးသည်။ဒီလူအများရဲ့ရှေ့၌ကုမ္ပဏီအကြောင်းတွေကိုကြော်ညာပေးမည်ဆိုပါက။
ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးရှိမည်။ကြော်ညာခ စရိတ်အတွက်သူတို့အသင်း ဒေါ်လာ(၆၀၀)ရချင်သည်ဟု ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲလည်းသူတို့အသင်းကို သဘောကြသည်။ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံပြီးဒေါ်လာ(၆၀၀) ထုတ်ပေးလိုက်သည်။
အသင်းအားလုံး ရင်းနှီးပြီးဆုံးချိန်။အခန်းရှေ့ထွက်ပြီး။ကိုယ့်အိုင်ဒီယာငွေရှာလာသည့် ပုံစံ။ရရှိလာသည့် အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြကြသည်။ငွေအများဆုံး ရသည့်အသင်းကတော့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ညာပေးရင်းသူ့တို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာအကြောင်းကိုပါရှင်းလင်းပြောပြသည်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဒီလောက်နှင့်ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မည်။အရင်းအနှီး တစ်ပြားမှ မသုံးပဲ။ငွေ (၆၀၀) ဒေါ်လာရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသား/သူ တွေဟာ။ဘာတွေ သင်ပေးသွားပါသလဲ။ ???
ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ငွေအင်အားကိုမကြည့်သင့်ပါ။အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။ကိုယ့်မှာ ရှိသည့် ညဏ်ရည်ကိုသာအသုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အကယ်၍ငွေ ၁၅ သိန်းရှိမှ။
သိန်း ၃၀ ရှိမှ။သိန်း ၁၀၀ ရှိမှ။ရင်းနှီးနိုင်မယ်။လုပ်နိုင်မယ် လို့သာတွေးနေရင်အာရုံစိုက်နေရင် မင်းဦးနှောက်ကို မင်းပဲပြန်ပိတ်ပင်လိမ့်မယ်။ဘာ အိုင်ဒီယာမှ မထွက်ပါ စိတ်ကူးကောင်းမှလဲထွက်လာမှာ မဟုတ်။
မင်းဝင်ငွေ များချင်လို့။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာလေ။ငွေရှာချင်တာလေ။ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုငွေမရှိဘူး၊အရင်းနှီးနည်းတယ်လို့သာစွတ်ပြောနေရင် ရယ်စရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာမင်း ခေါင်းပဲ။ခေါင်းသုံးပါ၊ ညဏ်သုံးပါ။အိုင်ဒီယာသုံးပါ။အဲ့ဒီအရာတွေက ငွေထက်သန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရင်းနှီး နည်းနည်းနဲ့လုပ်ငန်းစကြတဲ့ လူအတော်များများကို တွေ့ဖူးသည်။
အင်တာဗျူးဖူးသည်။အဲ့ထဲက တစ်ယောက်အကြောင်းကိုအရင် ရေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ကျန်တာက နောက်မှဆက်လက်တင်ပြမည်။
သူကကောင်မလေးပါ။ဒုတိယနှစ်၊ အဝေးသင်ကျောင်းသူ။၁၀ တန်းပြီးတာနှင့်။နံနက် ၄ နာရီနိုးသည်။ဝက်ခေါက်၊ ကြက်ခေါက်တွေကြော်သည်။ ဈေးသို့တင်ရောင်းသည်။နေ့ခင်းပိုင်းမှ ညနေအထိလေယဉ်လက်မှတ်ရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်သည်။ဆိုင်ခန်းငယ်ကလေးဖြင့်လေယဉ် လက်မှတ်ရောင်းနေသည်။
သိပ်မကြာမှာပဲဆိုင်ကို အလှဆင်ပြီး။အမျိုးသမီးအိတ် ကလေးတွေကိုအနည်းအကျင်းတင်ရောင်းသည်။နောက်ထပ် မကြာခင်မှာပဲသူသဘောကျသည့် အင်္ကျီတွေ၊သူသဘောကျသည့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။
သူလုပ်ချင်တာကိုတတ်နိုင်သလောက်သူလုပ်လာသည်။အခုလဲ သူပုံနှိပ်စက်တွေပါလုပ်နေသည်။ပုံနှိပ်သည့် နေရာက အိမ်မှာ။ပစ္စည်း/အလုပ် လက်ခံတာကဆိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
သူမ လုပ်ချင်တာကိုတစ်ခုပြီး တစ်ခု။တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်။တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ဟုတ်ကဲ့ သူမလည်းသူ့ အိုင်ဒီယာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာဖတ်သူလည်း‌ငွေကို ဦးစားမပေးသင့်။ငွေကို အာရုံမစိုက်သင့်။ငွေ ဒီလောက်ရှိမှငွေ ဟိုလောက်ရှိမှ ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ထားတာပါ။ငွေကို အာရုံစိုက်နေရင်။ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ။စိတ်းကူးကောင်းတွေ။အိုင်ဒီယာကောင်းတွေကိုပါ။ဖြတ်စီးပြစ်လိမ့်မယ်။
ကိုယ် ဘာကျွမ်းကျင်တာ ကိုယ် ဘာတွေ့ထားတယ်။ကိုယ် ဘာလုပ်သင့်တယ်။ဘယ်အခွင့်အရေးကို ယူသင့်တယ်။စသည့်အချက်တွေကို သိပါစေ။မသိသေးလဲ အဖြေရှာ။ကိုယ့်မှာ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေရှိရင်။
လက်တွေ့ လုပ်လိုက်ပါ။တတ်နိုင်သလောက် စလုပ်ပါ။လုပ်ပြီး မအောင်မြင်သေးပေမဲ့အားမငယပြါနဲ့။ပြသနာတွေကို သိရှိလာမယ်။ဖြေရှင်းတတ်လာမယ်။အစပိုင်း ဝင်ငွေနည်းနေပေမဲ့ဝင်ငွေ များလာအောင်လုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေကိုအဖြေရှာတတ်လာမယ်။ရည်မှန်းချက်ကို အလှမ်းမဝေးပါစေနှင့်
ဥပမာ(၁)လမှာ ဝင်ငွေ (၃)သိန်းရှိတယ်။ည်မှန်းချက်က နောက်လမှာဝင်ငွေ(၁၅)သိန်းတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့။ဦးနှောက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပဲ တွေးလိမ့်မယ်။
ဝင်ငွေ (၃)သိန်းရှိရင်နောက် လမှာ(၅)သိန်းဝင်နိုင်အောင် ရည်မှန်းထားပါ။အာ့မှ ဦးနှောက်လဲအလှမ်းမဝေးတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုဖြစ်မြှောက်အောင် အဖြေရှာပေးလိမ့်မည်။
အိုင်ဒီယာရှိပြီးလက်တွေ့မလုပ်သေးပဲ။အစဉ်စီချလိုက်။ဟိုဟာ စောင့်လိုက်၊ဒီဟာ စောင့်လိုက် ဆိုရင်တော့ဘဝက ဘာမှ ဖြစ်မြှောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေထက် တန်ဖိုးကြီးတာမင်း ခေါင်းပါ။က်တွေ့လုပ်ဖို့လဲ လိုတယ်။
စာဖတ်သူလဲ အရင်းအနှီးကိစ္စကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ၊ဘယ်လိုယူစပါသလဲ၊ ဆိုတာကိုComment ပေးကြပါလို့။ဗဟုသုတတွေမျှဝေရင်းအပိုင်း(၂)မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြမယ်။အားလုံးငွေကြေးရေးအဆင်ပြေကြပါစေ။
တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်တောင်ကြုံတွေ့ရခဲတဲ့ အကြီးမားဆုံးရွှေတုံးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မိုင်းလုပ်သားတစ်ဦး
မိုးကြိုးသွား ဆိုတာ လူများစုထင်သလို ကောင်းကင်က ပစ်ချလိုက်တာ မဟုတ်ပါ …
ဖောရောင်တာအကုန်ပျောက်တဲ့ တောသပွတ်ခါးသီး အစွမ်းအံ့မခန်းပါပဲ
Previous Article ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ ပြန်ဖတ်ဖတ် ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ “အိမ်ရိုက်သံ”
Next Article အခုတစ်လော ထိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ 2D 3D ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်း တဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် သိန်း၁ဝဝတန် ဒိုင်ပြေးနံပတ် အထင်ရှားပေးပြန်ပြီ
ကျိုးသွားတဲ့ အရိုးတွေကို ကြပ်ထုပ်စီးပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင် ဝံအူမြစ်
ကြားဘူးခဲ့တဲ့ “မြေကြီးက ရွှေသီးတယ်”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ရွှေအစစ်တွေ ထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်
Copyright © 2022 Global News and Knowledge.